तिमीलाई मेरो श्रीमानले मन पराउनु हुन्छ रे ! – Complete Nepali News Portal
तिमीलाई मेरो श्रीमानले मन पराउनु हुन्छ रे !
April 30, 2017	27,936 Views
धेरै भएको थियो । उ#2305;, म अनि मेरो सन्तानबाट टाढिएको । मलाई जस्तै कसम र बाचा बन्धन गराउँदै, मलाई जस्तै तिमी विना बाँच्न सक्तिन भन्दै, उसले अरु कसैसँग घर गृहस्थी बसाइ सकेको थियो ।